Zava-misy mahaliana momba ny vy varahina | Ny zavatra mahaliana momba ny singa simika
Ny varahina no vy metaly mena amin'ireo singa rehetra. Fantatra fa manana fitarihana herinaratra tsara izy, izay vy voalohany nitrandrahana sy namboarin'olona
Zava-misy mahaliana momba ny vy varahina
Copper dia metaly tetezamita hita ao amin'ny sela 29, ao amin'ny vondrona IB ao amin'ny latabatra rafitra maharitra. Ny varahina dia fantatra amin'ny alàlan'ny metaly indostrialy noho ny hakelaka, ny fikojakojana, ny fitondra hafanana, ny fitondra hafanana tsara ary ny fanoherana ny harafo. Ankoatr'izay, izy io dia sakafo mahavelona amin'ny sakafo isan'andro ary ny varahina koa dia manana toetra mampiavaka ny bakteria, koa ny varahina dia lasa zava-dehibe kokoa hisorohana ny aretina. Ireto misy zava-misy mahaliana 10 momba ny varahina - ny vy fahatelo aorian'ny vy sy aliminioma amin'ny fanjifana eran-tany.
Ny toeran'ny varahina ao amin'ny latabatra rafitra maharitra
10 zava-misy mahaliana momba ny varahina
1. Ny anarana varahina dia nomen'ny Romana, nantsoin'izy ireo hoe "aes cyprium" izay midika hoe "vy avy any Sipra" satria ny varahina be dia be nampiasana tamin'izany fotoana izany dia tany Sipra.
2. Nampiasa ny marika Ankh ny Egyptianina mba hilazana ny varahina ao amin'ny rafitr'izy ireo hieroglyphic. Izy io koa dia maneho ny fiainana mandrakizay. Notaterin'ny arkeology fa ny fantsom-by dia nataon'ny Ejipsianina taloha mba hitarika rano tamin'ny taona 2750 talohan'i Kristy.
3. Fantatrao ve fa ny Sarivongan'ny fahalalahana any New York dia vita amin'ny varahina mihoatra ny 80 taonina avy amin'ny Vanja Copper mine any Norvezy. Ny sarivongan'ny fahalalahana dia namboarin'ireo mpanao asa tanana frantsay, niaritra dia lavitra avy tany Frantsa nankany Amerika izy ary nanohitra ny rivotra masira. Ny harafesina maitso voajanaharin'i Lady dia niaro azy tsy ho simba nanomboka tamin'ny 1886.
Ny Statue of Liberty dia vita amin'ny varahina mihoatra ny 80 taonina
4. Ny varahina no vy metaly mena amin'ireo singa rehetra. Ny fanampiana varahina amin'ny volamena dia ny fomba fandatsahana ny volamena na ny raozy.
Ny varahina no vy metaly mena amin'ireo singa rehetra
5. Ny varahina no metaly olombelona tranainy indrindra efa hatramin'ny 10,000 8,700 taona mahery. Ny pendant varahina hita tany amin'ny faritra avaratr'i Irak androany dia teo amin'ny XNUMX XNUMX TK tany ho any.
6. 60% ny varahina ampiasaina amin'ny tariby, ny 20% dia ampiasaina amin'ny tafo sy ny fantsom-pako ao an-trano, raha 15% kosa no ampiasaina amin'ny famokarana milina indostrialy.
60% ny varahina no ampiasaina amin'ny tariby, 20% no ampiasaina amin'ny tafo sy ny fantsom-pako ao an-trano, raha 15% kosa no ampiasaina amin'ny famokarana milina indostrialy.
7. Copper koa dia mpamatsy mikraoba voajanahary mba hampitsaharana ny fihanaky ny bakteria, ary ny fantsom-by sy ny fantsom-by varahina dia matetika ampiasaina amin'ny tranom-panjakana.
8. Mihoatra ny 400 ny firaka varahina ampiasaina ankehitriny. Ny varahina dia firaka varahina sy zinc, raha ny varahina kosa dia firaka varahina, vifotsy, aliminioma, silikika ary beryllium.
9. Ny varahina dia singa iray tena ilaina amin'ny sakafo mahavelona. Ity mineraly ity dia manan-danja amin'ny famolavolana sela ary hita amin'ny sakafo maro toy ny legioma maitso, voamaina, ovy ary tsaramaso. Raha manana varahina be ny vatana dia mety hiteraka jaundice, anemia ary fivalanana.
10. Ny varahina dia nampiasaina hanaovana dinar ary ankehitriny dia amin'ny euro. Ny Euro dia misy alimo varahina isan-karazany toy ny volamena Nordic, novolavolaina manokana ho an'ny vola vaovao. Rehefa nandeha ny fotoana, ny varahina dia nahatratra ny volamena sy volafotsy mba ho lasa vy be mpampiasa indrindra amin'ny vola madinika.
Rehefa nandeha ny fotoana, ny varahina dia nahatratra ny volamena sy volafotsy mba ho lasa vy be mpampiasa indrindra amin'ny vola madinika.
Zava-misy mahaliana momba ny helium Zava-misy mahaliana momba ny lithium Zava-mahaliana momba ny Beryllium Zava-misy mahaliana momba an'i Carbon Zava-mahaliana momba ny Nitrogen Zava-mahaliana momba ny Oksizena Zava-mahaliana momba an'i Neon Zava-mahaliana momba ny flluorine Zava-misy mahaliana momba ny chromium Zava-mahaliana momba ny Zinc Zava-mahaliana momba an'i Gallium Zava-misy mahaliana momba an'i Nickel Zava-misy mahaliana momba ny Cobalt Zava-misy mahaliana momba ny vy Zava-mahaliana momba ny Manganese Zava-misy mahaliana momba an'i Vanadium Zava-misy mahaliana momba an'i Titan Zava-mahaliana momba ny Scandium Zava-misy mahaliana momba ny kalsioma Zava-misy mahaliana momba ny hidrogen - singa maivana indrindra amin'ny latabatra maharitra.